टी–ट्वान्टी महाभिडन्त आज,दबाबमा भारत,उत्साहित पाकिस्तान,कसले मार्ला बाजी ? - Nepal News - Latest News from Nepal
टी–ट्वान्टी महाभिडन्त आज,दबाबमा भारत,उत्साहित पाकिस्तान,कसले मार्ला बाजी ?
By nepalnews	 On Mar 19, 2016
काठमाडौं,चैत ६ । भारतमा चलिरहेको आइसिसी ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज आयोजक भारत र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल कोलकाताको इडेन गार्डेनमा नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने ८ बजे सुरु हुनेछ । न्यूजिल्याण्डसँग पहिलो खेलमा पराजित भएको भारत दोस्रो खेलमा पाकिस्तानमाथि जित दर्ता गर्दै खाता खोल्ने प्रयासमा हुने छ भने पाकिस्तान दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पाकिस्ताले भने पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको थियो। भारत र पाकिस्तानबिचको खेललाई दुवै देशका खेलाडी र समर्थकले जित हार भन्दा पनि प्रतिष्ठाको लडाईँको रुपमा लिएका छन् । भारतलाई प्रतियोगितमा रहने सम्भावना बलियो बनाउन यो खेल जित्नै पर्ने दबाब छ ।
५ करोडमा १५ ओटा लिफ्ट सिँचाइ उपआयोजना